Madaxweynaha oo soo dhaweeyay Safiiro cusub oo shan ah. • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Federal Republic of Somalia / Madaxweynaha oo soo dhaweeyay Safiiro cusub oo shan ah.
Madaxweynaha oo soo dhaweeyay Safiiro cusub oo shan ah.
February 26, 2013 - By: Hanad Askar
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa Villa Soomaaliya ku qaabilay safiiro cusub oo ay soo magacaabeen 5dal oo ka tirsan Midowga Yurub
Safiiradda cusub ayaa waxay kala yihiin Ambassador Margit Hellwig-Bötte oo ka socota dalka Jarmalka, H.E. Etienne De Poncins,Fransiiska, Ambassador Javier Herrera García-Canturri Spain,Ambassador.Bart Ouvry Beljinka, Ambdbassador Sofie Emmesberger oo ka socoatay Finland.
Source: Xafiiska Madaxweynaha